tag: Snapchat စျေးကွက်ရှာဖွေရေး Martech Zone
tag: Snapchat စျေးကွက်ရှာဖွေရေး
စနေနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 4, 2017 စနေနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 13, 2021 Douglas Karr
ကျွန်ုပ်တို့၏ Martech အသိုင်းအ ၀ ိုင်းရှိလူကြိုက်များသောစစ်တမ်းတစ်ခုတွင်ဖြေဆိုသူ ၅၆ ရာခိုင်နှုန်းကယခုနှစ် Snapchat ကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်အသုံးပြုရန်အစီအစဉ်မရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ၉% ကသာအသုံးပြုကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးကျန်ကမူမဆုံးဖြတ်ရသေးကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ကြီးထွားမှုနှုန်းကြီးထွားလာနေသောကွန်ယက်တစ်ခုအတွက်၎င်းသည်အတိအကျမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင် app ဖွင့်တိုင်းအချိန်တိုင်းရှုပ်ထွေးနေဆဲဖြစ်သည်။ ငါနောက်ဆုံးမှာပုံပြင်များနှင့်ရိုက်ရှာပါ
လူမှုမိုဘိုင်းပလက်ဖောင်းများလူကြိုက်များလာသည်နှင့်အမျှအလားအလာရှိသော ၀ ယ်သူများနှင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်နှင့်ထိတွေ့ရန် platform ကိုအမြဲတမ်းအသုံးပြုရန်အခွင့်အရေးအမြဲရှိသည်။ Snapchat သည်နေ့စဉ်သန်းပေါင်း ၁၀၀ ကျော်နေ့စဉ်ဗီဒီယိုပေါင်း ၈ ဘီလီယံကိုကြည့်ရှုနေသောမျှော်လင့်ချက်ထက်ကျော်လွန်နေသည်။ Snapchat သည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များနှင့်အကြောင်းအရာထုတ်လုပ်သူများအားပလက်ဖောင်း၏ထူးခြားသောအပြန်အလှန်စွမ်းရည်ကိုဖန်တီးရန်၊ မြှင့်တင်ရန်၊ ဆုချရန်၊ ဖြန့်ဝေရန်နှင့်အားပေးရန်ခွင့်ပြုသည်။ စျေးကွက်သမားများက Snapchat ကိုဘယ်လိုအသုံးချကြသလဲ Hold တွင် M100
နည်းလမ်းများစွာအနေဖြင့်၊ ဤအရာအားလုံးသည်သင်၏ဖောက်သည်သည်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းနှင့်သူတို့၏ခရီးသည်အဘယ်သို့ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ လူတိုင်းကဒီအချက်မှာ Snapchat အကြောင်းသိတယ်ဟုတ်လား? ဒီတစ်ခုပေါ်မှာမှောင်မိုက်၌နေဆဲမည်သူမဆို? သို့ဆိုလျှင်၊ သင်သိရန်လိုအပ်သည်။ ဤသည်မှာအသက် ၁၆ နှစ်မှ ၂၅ နှစ်အတွင်းလူကြိုက်အများဆုံးလူမှုကွန်ယက်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကောလဟာလသတင်းများအရဒေါ်လာ ၅ ဘီလီယံတန်သည်။ မည်သူမျှထိုငွေကိုငွေရှာနေပုံရသည်။ အခုတော့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း